nepal life insurance(nepal life insurance) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
nepal life insurance
नेपाल लाइफका १५०० बढी अभिकर्ता काठमाण्डौमा, चालु आबमा संख्या दोब्बर बनाउने सीइओको घोषणा
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आइतबार काठमाडौंमा ‘स्किल डेभलपमेन्ट एन्ड मोटिभेसन प्रोग्राम’ आयोजना गरेको छ । सो कार्यक्रम नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विवेक झाले पानसमा बत्ती बालेर समुद्घाटन गरेका थिए । आफ्ना अभिकर्ताहरुको क्षमता अभिबृद्धि गर्ने तथा...
नेपालको बीमा व्यवसायमै सबैभन्दा बढी आयकर बुझाउने नेपाल लाइफ सम्मानित
काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नेपालमा बीमा व्यवसाय गर्ने कम्पनीमध्येमै सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेकाले आन्तरिक राजस्व विभागले नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई कदरस्वरुप सम्मान गरेको हो । आठौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७६ को अवसरमा आज मंसिर १ गते काठमाडौंमा आयोजित एक समारोहका बीच प्रमुख अतिथि तथा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले...
नेपाल लाइफद्वारा बिमा शुल्क आर्जनमा ४३.९०% को छलाङ, जीवन बिमाकोषमा ३२.८७% को बढोत्तरी
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमै ७ अर्ब ८१ करोड बढी बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । कम्पनीले गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा बिमा शुल्क आर्जनतर्फ ४३.९० प्रतिशतको छलाङ मारेको हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिका ५ अर्ब ४३ करोड बिमा शुल्क आर्जन भएको थियो । देशकै टप जीवन बिमा कम्पनी नेपाल लाइफले समीक्षा...
डोल्पाको दुनैमा नेपाल लाइफको शाखा
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले एक कार्यक्रमका वीच डोल्पाको दुनैमा शाखा कार्यालय उद्घाटन गरी कारोबार सुरु गरेको छ । उक्त औपचारिक कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईले डोल्पाको दुनै शाखाको विधिवत् उद्घाटन गरे । उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष चापागाँईले जीवन बीमाले जोखिम...
नेपाल लाइफको लोभलाग्दो प्रगति: बिमाशुल्क ४२.७६% र जीवन बिमा कोषमा ३१.७९% छलाङ
काठमाण्डौ । जीवन बिमामध्येकै टप नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २२ अर्ब ८२ करोड खूद बिमा शुल्क आर्जन गरेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा ४२.७६ प्रतिशतले बढी हो । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा नेपाल लाइफले १५ अर्ब ९८ करोड खूद बिमा शुल्क आर्जन गरेको थियो । समीक्षा अवधिमा कम्पनीले ५२ करोड ३२...
नेपाल लाइफले ल्यायो ‘सदावहार जीवन बीमा योजना’: सुविधाहरुले भरिपूर्ण बजारकै पृथक प्रडक्ट
काठमाडौं । विगत १८ वर्षदेखि नेपाली जीवन बीमा क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गरी आम जनमानसमा लोकप्रिय बनेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पछिल्लो समय अझ उत्कृष्ट किसिमका योजनाहरु ल्याइरहेको छ । केही महिनाअघि मात्र ‘घातक रोग सुविधा योजना’ नामको योजना ल्याएर नेपाली बीमा क्षेत्रमै चर्चित बनेको यस कम्पनीले फेरि अर्को...
नेपाल लाइफ कुल बिमा शुल्क आम्दानीको ३२% बजार हिस्सा ओगट्न सफल, सेयरधनीका लागि ४८.५% लाभांश पारित
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले कुल बिमा शुल्क आम्दानीमा सर्वाधिक करिब ३२ प्रतिशतको बजार हिस्सा हासिल गरेको छ। देशका बिमा कम्पनीहरुको कुल बिमा शुल्क आम्दानीमा नेपाल लाइफ एक्लैको बजार हिस्सा ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको हो । यो कम्पनीको शनिवार वीरगञ्जमा सम्पन्न १९ औं वार्षिक साधारणसभामा आफ्नो वार्षिक...
प्रिमियम संकलनमा नेपाल लाइफको ४२% को छलाङ, जीवन बिमाकोष बढेर ५९.४६ अर्ब
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेश्रो त्रैमाससम्ममा प्रिमियम संकलनमा छलाङ मारेको छ । यो अवधिमा नेपाल लाइफले १५ अर्ब १९ करोड प्रिमियम संकलन गरेको हो। अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा कम्पनीले १० अर्ब ६९ करोड मात्र प्रिमियम संकलन गर्न सकेको थियो। यसरी प्रिमियम संकलनमा कम्पनीले ४२ प्रतिशतको छलाङ...
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक साधारणसभा आह्वान गर्ने पहिलो बिमा कम्पनी बनेको छ । यो कम्पनीको बैशाख १२ गते बसेको संचालक समितिको बैंठकले १९ औं वार्षिक साधारणसभा जेठ ४ गते शनिवारको दिन पर्साको वीरगञ्जस्थित होटल दियालो लर्डस प्लाजामा आह्वान गरेको हो । साधारणसभाले संचालक समितिले गरेको...
नेपाल लाइफको ‘घातक रोग सुविधा योजना’ सार्वजनिक, रू. ५० लाखसम्मको रिस्क कभर हुने
काठमाडौं । विगत १८ वर्षदेखि नेपाली जीवन बीमा क्षेत्रमा उत्कृष्ट सेवा तथा सुविधा प्रदान गरी आम जनमानसमा लोकप्रिय बनेको नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले पछिल्लो पटक विभिन्न घातक रोगहरू (क्रिटिकल इल्नेस) को जोखिम बहन गर्ने बीमा योजना सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आफ्ना उच्च अधिकारी र एजेण्टहरूको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमका बीच रू. ५०...
नेपाल लाइफको सेयरमा ओइरिए लगानीकर्ता, ५ दिनमा ९.३५% ले मूल्यवृद्धि
काठमाण्डौ । आकर्षक लाभांश पाउने आशामा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले विगत ५ दिनदेखि लोभलाग्दो कारोबार गरिरहेको छ । यो कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नाफाबाट आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र २३.५ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेसँगै यो कम्पनीको सेयर उठाउनेहरु बढेका हुन् । फागुन १५ गतेसम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको...
बम्पर लाभांशले नेपाल लाइफको सेयरमा खरीद चाप
काठमाण्डौ । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स लिमीटेडले सेयरधनीलाई घोषणा गरेको आकर्षक लाभांशका कारण दोश्रो बजारमा कम्पनीको सेयरमा खरीद चाप देखिएको छ । बम्पर बोनसको लोभमा लगानीकर्ताले दोश्रो बजारमा यो कम्पनीको सेयर खरिदारीमा ध्यान दिंदा मूल्य समेत बढेको छ । आइतबार बजार खुलेको पहिलो एकघण्टामा कम्पनीको सेयरमूल्यमा करिब ४ प्रतिशतको...
सेयरधनीलाई नेपाल लाइफको डबल धमाका, कुल ४८.५% लाभांश प्रस्ताव
काठमाण्डौ । जीवन बिमा कम्पनीहरुमध्ये आकर्षक र टप नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आफ्ना सेयरधनीका लागि लाभांशको डबल धमाका प्रस्ताव गरेको छ । यो कम्पनीको फागुन १७ गते बसेको संचालक समितिको २८२ औं बैठकले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मुनाफाबाट कुल ४८.५ प्रतिशत लाभांश वितरणको घोषणा गरेको हो । कम्पनीले आफ्ना सेयरधनीलाई २५ प्रतिशत बोनस सेयर र कर...
प्रिमियम संकलनमा नेपाल लाइफको छलाङ, जीवन बिमाकोष झन्-झन् बलियो
काठमाण्डौ । जीवन बिमा कम्पनीहरुमध्येकै टप नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले प्रिमियम संकलनबाट हुने आम्दानीमा छलाङ मारेको छ । यो कम्पनीले अघिल्लो वर्षको दोश्रो त्रैमासमा प्रिमियमबाट ७ अर्ब १४ करोड आम्दानी गरेकोमा यो वर्ष बढेर १० अर्ब ४७ करोडको उचाईमा पुगेको हो । कम्पनीले १० लाख ८० हजारमा सीमित बिमालेख संख्या बढाएर १२ लाख ९ हजार माथिको उचाई...
एनसीसी बैंकले नेपाल लाइफको बिमा पोलिसी बिक्री गर्ने
काठमाण्डौ । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंक लिमीटेड र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमीटेड बीच बैंकासुरेन्स सम्झौता भएको छ । एनसीसी बैंक आफ्ना शाखा सञ्जालमार्फत नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको पोलिसी बिक्री गर्न तयार भएको हो । यो सम्बन्धी सम्झौतामा मंसिर ३ गते हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता अनुसार एनसीसी बैंकको कर्पोरेट तथा...
नेप्सेको टिएमएस ह्याकरले कब्जा गरेका हुन् ? छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी
अब एनआईसी एशियाको चेक जम्मा गर्न बैंकमै धाउनु नपर्ने, अनलाइनबाटै भौचर भर्न सकिने
अब बीओकेका ग्राहकले ‘खल्ती’ का डिजिटल सुविधाहरु प्रयोग गर्न पाउने